Kwasukasukela, ngosuku njenganoma iyiphi enye, inkosazana wathola incwadi ongaqondakali akude yesihlobo esihlala e ezweni kude ezweni Gnome. It funda ukuthi umalume wakhe uVlad seliphelile benganakwa (futhi mhlawumbe wafa), futhi inkosazana sayalwa ukuba sibe nezinhloli castle wakhe wokufakaza...
Ama-Pixel Amasosha: Impi Enkulu ilula ukudlala, kodwa kunzima ukuqonda ukusetha umdlalo weqhinga elisuselwa ngesikhathi seMpi Yezwe Yokuqala. Uzokhetha ukuyala amabutho we-Entente (eFrance, eBrithani naseRussia) noma e-Central Powers (eJalimane, e-Austria naseMbusweni wase-Ottoman).Uzolwa kusukela...
- Lemegeton Master Edition manje Moga okusezingeni eliphezulu! Ungazitholela ezitolo ezinkulu, othwala izitolo kanye inthanethi at http://www.MOGAanywhere.com- I umdlalo Action udinga ukudlala- Kucukatse full Lemegeton Episode 1 iziciPlus!!- Lemegeton Episode 2 New Content- Balingisi ababili...
The Little Ones lokwanda komkhathi iyatholakala manje njengoba uhlelo in-app ukuthenga!"Uma uke kungenjalo kakade kudlalwa le brilliant, umdlalo kubuhlungu inhliziyo-, khona-ke mobile kufana nendawo yimuphi ukuba angakuvumela ukuba anibhubhise ngokuphelele." -, 9/10, Pocket Gamer...
** Play Store Game Innovative Iningi 2016 **Hlala esihlalweni sobukhosi njengoMbusi inkosi nonomusa (noma senzondo) ephakathi kweminyaka engu yesimanje futhi swayipha iminwe yakho bobukhosi noma kwesobunxele noma kwesokudla ukuphoqelela intando yakho aphezu kombuso. Usinde GAUNTLET ezibonakala...
I-CrossWords 10 Pro yiyona nguqulo egcwele ye-CrossWords 10 iphazili.Iqukethe izici eziyingqayizivele: • Azikho izikhangiso! Isixhumanisi esihlanzekile nokusetshenziswa kwe-intanethi encane.• Ama-crosswords amaningi: Unamabhodi angu-270 (ngaphezulu kuka-180 inguqulo yamahhala).• Usizo...
Ngonyaka ka-2049, ama-robot asetshenziswe ngendlela evame ukubizwa ngokuthi i-GEAR asetshenziselwa ukusetshenziswa kwesosha. Kusukela ngaleso sikhathi, ukusebenza kwabo okunemisebenzi eminingi kubangele ukuba babe indawo evamile ekusetshenzisweni kwezohwebo, kodwa futhi kwaveza imboni yonke...
*** HHAYI Ihambisana ne-Android 7 ***A ANAMANDLA Sci-Fi INDABA UKUTHI CONTROLIngxenye yesibili Kyle B. Stiff sika adventure edume gamebook uchungechunge ekhuliswe ekuphileni kunanini ngaphambili. Ulungele ride zokuphila kwakho njengoba ilowo hero uhambo lwakho siqu kakhulu.EZIPHUMA: * Multiple...